Honda olingene injini - Nantong ant Machinery Co., Ltd
ekhaya » Product » Honda olingene injini
Honda qala ku 1948 ukuvelisa amandla injini ibhayisekile, uye ku "iphupho" njengoko sifune "yorhwebo" ngokohlobo abantu kunye noluntu kuqhubeka ukunika uluhlu olubanzi inkcubeko mobile.
"Ukuhlonipha kwabanye abantu", ukubaluleka ubuntu ngamnye \_ ngamnye 's, evumela Honda baseka abasebenzi creative ohloniphekileyo, lubanzi amasiko ibhizinisi. ngoku, Honda uye eqhelekileyo ukusuka injini ezincinane, izithuthuthu kunye imoto emoto, kunye nezinye emasimini babe ubuchwepheshe yokuqala, uze uqhubeke uphuhliso, imveliso iimveliso lwamashishini amatsha.
Venture ukususela ekuqaleni, Honda sele a "wokuxola ngokuba lonke," ingcamango rhoqo vula ityala labo.
"Njani le ngokwaneliseka lendawo" njengoko injongo yayo, nje kuphela ukubonelela ngokumiselwa kwempahla zasekuhlaleni kunye neenkonzo womnatha ebanzi yokuthengisa, Bamisa indawo imveliso yasekuhlaleni kunye nophando nophuhliso lwemveliso ezintsha ukucwangcisa indlela.
Ngoku, ngaphandle Japan, Honda 29 amazwe kwihlabathi kunye ngaphezu 120 iziseko production, ngesithuthuthu, iimveliso imoto kunye nalawo, nganye kwezi ndawo, ngokuninzi nge 17 million ngaphezulu.
Ngaxeshanye, Honda iye iphinde ngokubonakalayo enze ukuba ngummi wobambiswano nabanye abantu, kunye ngenkuthalo uphonononge ukhuselo lokusingqongileyo kunye nezisombululo zokhuseleko.
iingxaki Global kokusingqongileyo namhlanje \_ 's ngokuya abaziwayo, Honda kuphuhliso lwemveliso, zemveliso kunye nokuthengisa imicimbi eyahlukeneyo kwiinzame zokusombulula ungcoliseko lomoya kunye ukunciphisa ukukhutshwa CO2, nokusetyenziswa kwezibonelelo kunye nemiba amandla ukufikelela izinto zokucoca ukukhutshwa, Nciphisa amafutha, line yemveliso, "Green Factory" yaye yamkela uthotho lwamanyathelo ukunciphisa ifuthe kwindalo eMhlabeni \_ 's wenze iminikelo HIV. Kuba ukubonelela inkcubeko mobile kubenzi, Honda Akukuboni kuphela abasebenzi Anike ingqalelo ukhuseleko abahambi ngeenyawo, ukuvelisa iimveliso ukuphepha ngaphezulu. Ngaxeshanye, bathathe inxaxheba uqhuba ekhuselekileyo, kunye neminye imisebenzi zokufikelela ukusombulula ingxaki kwinkqubo yezothutho, ukwakha ngaphezulu uluntu esisityebi mobile, kwaye wenze imizamo wenkuthalo.